Mauritius oo sheegtey in COVID-19 ay ka wada bogsadeen dalkeeda – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Mauritius oo sheegtey in COVID-19 ay ka wada bogsadeen dalkeeda
Mauritius oo sheegtey in COVID-19 ay ka wada bogsadeen dalkeeda
Dalka Mauritius wuxuu shaaca ka qaaday guud ahaan iney ka bogsadeen cudurada coronavirus ilaa 11kii may, 2020. Bogga rasmiga ah ee Jasiiradda COVID-19 wuxuu sheegay in 322 qof ay ka soo kaceen 332-kii kiis ee la xaqiijiyey illaa iyo hadda. 10 qof ayaa ilaa iyo hadda u dhintay xanuunka dalkaas.
11-kii May ayaa xustay maalintii shan iyo tobnaad oo isku xigta oo aan kiis cusub laga diiwaan gelin dalka. xidhnaashaha wadan wuu sii jiri doona, si kastaba ha ahaatee, wuu ka jirayaa xidhnaashuhu si loo xakameeyo suurtagalka faafitaanka fayraska.
War-murtiyeed, Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayoqabka ayaa Isniintii sheegtay in 73,572 tijaabooyin COVID-19 la qabtay, oo ay ku jiraan 50,077 Rapid Antigen Tests iyo 23 495 PCR tests (polymerase chain reaction).
Waxay intaas ku dartay in dhammaan 220 muwaadin ee dhowaan laga soo celiyay dibedda ay wali ku jiraan karantiil.
Dalka Mauritius ayaa noqonaya waddankii labaad ee Afrika ee ku dhawaaqa xaalad aan ka jirin virus-ka caabuq kadib. Toddobaadyo ka hor dalka Mauritania waxaa laga soo sheegey in ay ka soo kabanayaan (6 soo kabasho iyo dhimasha waqtigaas), infekshan ayaa hada mar kale dub looga helay 332 qof kuwaas oo dhamaantood ka bogsadey
Laga bilaabo May 12, 2020, waddanka kaliya ee Afrika ka xor ah fayraska waa Mauritius. Lesotho waa dalka kaliya ee Afrikaan ah ee aan wali diiwaan gelin kiis. Ereteriya, Seychelles iyo Mauritania mid walbaa wuxuu heystaa hal kiis marka loo eego inta ay diwaan galisey jaamacada John Hopkins University